Windows7ကို, 8 အတွက်ဖိုင်ကနေ extension ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဆိုပါဖိုင် extension ဖိုင်အမည်ကိုထည့်သွင်းခံရဖို့အက္ခရာများနှင့်နံပါတ်များကိုတစ်ဦး 2-3 ဇာတ်ကောင်အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်၏ဤအမျိုးအစားဖွင့်လှစ်ဖို့အဘယျသို့အစီအစဉ်ကိုသိရန် OS ကို: ဒါဟာအဓိကအားဖိုင်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့အသုံးပြုသည်။ လူကြိုက်အများဆုံးဂီတပုံစံများ၏ဥပမာတစျခု - တစ်ဦး "mp3," ။ Windows တွင် default အနေဖြင့်ထို program files တွေကို Windows Media Player များမှာဖွင့်လှစ်။
အဘယ်ကြောင့် mouse ကိုကို standby mode ကိုအတွက်မှတ်စုစာအုပ် (ကွန်ပျူတာ) ဖြစ်ပါသည်ပါဘူး
မင်္ဂလာပါ သိပ်အများကြီးအသုံးပြုသူများကိုတဦးတည်းကွန်ပျူတာ shutdown ချ Modes သာကိုခစျြ - ကို standby mode ကို (သင်လျင်မြန်စွာကို turn off နှင့် PC ကို, 2-3 စက္ကဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ) ။ သို့သော်တစ်ဦးအတွက်အသိပေးချက်အဲဒီမှာဖြစ်ပါသည်: အချို့သော (ဥပမာ) အ Laptop ကိုသင်ပါဝါခလုတ်ပေါ်တက်နိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နှင့်မောက်ကခွင့်ပြုတော်မမူကြောင်းကိုကြိုက်ကြဘူး, ဆန့်ကျင်အပေါ်အခြားသူတွေအိမ်တအိမ်ကြောင်၌ရှိသကဲ့သို့, မောက်ကို turn off ဖို့တောင်း, သူမတော်တဆ mouse ကိုထိရသောအခါကြသည် - ကွန်ပျူတာနှိုးနဲ့လုပ်ကိုင်ဖို့စတင်သည်။
တစ်ဦး flash drive ကိုသို့မဟုတ် disk ပေါ်မှာကြီးမားတဲ့ file ကိုမီးမရှို့ဖို့ကိုဘယ်လို
မင်္ဂလာပါ တယောက်ကိုတယောက်ကွန်ပျူတာကနေတစျခု (သို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို. ) ဖိုင်တွေရွှေ့ဖို့တစ် flash drive ကိုပေါ်သူတို့ကို Pre-မှတျတမျးတငျထား: ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်တူပုံပေါ်လိမ့်မယ်။ စည်းကမ်းအဖြစ်, (4000 MB အထိအထိ) သေးငယ်တဲ့ပြဿနာတွေဖိုင်တွေရှိမဟုတ်, အဘယျသို့ (အကြီးစား) အခွားနှင့်အတူလုပ်ဖို့ချောင်းကိုတခါတရံ fit ပါဘူး (နှင့်သူတို့အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, fit ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ကူးယူအခါ, တစ်ဦးအမှားဖြစ်ပေါ်) သလော
ကောင်းသောနာရီ! ဒီဆောင်းပါးအတို၌ငါသင်ပုံရိပ်တွေ hosting ၏အကူအညီနှင့်အတူအခြားအသုံးပြုသူများ၏မျက်နှာပြင်ပုံပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုနည်းလမ်းအနည်းငယ်ပေးစေခြင်းငှါအလိုရှိ၏။ နှင့်အညီ, သင်တန်း၏, လဲလှယ် hosting များအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံများကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါသည်ဤဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ရွေးချယ်စရာ, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးမကြာခဏအဆုံးစွန်နှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုပါ။
ထိုအမှုကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ: သင်ရွှေ့ဖို့ရှိသည်နှင့်, ကွန်ပျူတာ (ဥပမာ, အင်တာနက်ကနေဖိုင်တွေကို download လုပ်ပါ) အချို့လုပ်ငန်းတာဝန်ဆောင်ရွက်။ သူ့ဟာသူချွတ် - သူဆိုပါကသဘာဝက file ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးနောက်ညာပါလိမ့်မယ်။ ရုံဤမေးခွန်းကိုနှောင်းပိုင်းတွင်ညအချိန်တွင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်တွေ excites - တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကသင်ရုံအိပ်ပျော်ကြောင်းဖြစ်ပျက်, နှင့်ကွန်ပျူတာအလုပ်လုပ်ဆက်လက်လို့ပဲ။
လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာတစ်လုံး၏ Monitor ပေါ်မှာမျက်နှာပြင်ကိုဖွင့်ဖို့ကိုဘယ်လို
နေ့သည်ကောင်းသော။ ဤဆောင်းပါးသည်ငါ၏အလက်တော့ပေါ်မှဂိမ်းများကိုအနည်းငယ်ကလူ (- တစ်ဦးကို PC ... ကြောင်းတကယ်ပဲသူတို့ PC ကိုဆိုသညျကားအံ့ဩစရာမရှိ) ကိုဝန်ခံခဲ့သောတဦးတည်းအားလပ်ရက်မှကျေးဇူးတင်စကားထင်ရှား။ , ငါသူတို့ကတွန်းသိရပါဘူး, ဒါပေမဲ့ 15-20 မိနစ်ခန့်အကြာတွင်ကျွန်မမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိပုံရိပ် "ဇောက်ထိုး" ပြန်လှန်ခဲ့ကွောငျးအသိပေးခံခဲ့ရသည်။
ဒါဟာမကြာခဏသင်သည်သင်၏ hard drive ကိုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောနာမတျောနှငျ့ဖိုင်တွေများပြားတဲ့စုဆောင်းအပေါ်၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်. စကားမပြောတတ်ကြဘူးရှိသည်တွေ့ကြုံတတ်၏။ ကောင်းပြီ, ဥပမာ, သင်ရှုခင်းတွေအကြောင်းဓါတ်ပုံတွေကိုရာပေါင်းများစွာသော download လုပ်ထားသောအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ဖိုင်တွေများ၏အမည်များကွဲပြားခြားနားသော။ အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအတွက်မျိုးစုံဖိုင်တွေအမည်ပြောင်းမဟုတ် "ရုပ်ပုံလွှာ-ရှုခင်း-number ကို ... " ။
မှားယွင်းနေသည်လျှောက်လွှာ 0xc000007b စတင်သောအခါအ
အားလုံးစာဖတ်သူများမှကောင်းသောနေ့က pcpro100.info! ယနေ့ငါပြီးသားတက်ကြွစွာဂိမ်းကစားနှင့်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအများ၏အံသွားအတွက် navyazla သောပြဿနာကိုသင်လမ်းလျှောက်ပါလိမ့်မယ်။ နီးပါးအမည်ပြောင် superspy တူသောအမှား 0xc000007b - သူမကပင်တစ်ဦးအေးမြ code အမည်ရှိပါတယ်။ သငျသညျ application အား run သောအခါအမှားယွင်းမှုတစ်ခုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအခါအကြှနျုပျသ 8 အဓိကနှင့်အခွအေနေတိုးတက်လာဖို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းတွေ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးကို TV သို့မဟုတ်မော်နီတာရန်သင့် Laptop ကို (ဂိမ်း console က) နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကေဘယ်လ်ကြိုးများနှင့် connectors ။ လူကြိုက်များ interfaces
မင်္ဂလာပါ မဟုတ်ဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်မ TV ကိုတစ် set ကိုထိပ်တန်း box ကိုချိတ်ဆက်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသဖြင့်, လက်လက်ျာဘက် adapter မှာတဦးတည်း (သို့သော်မာဖီရဲ့ပညတ်တရားအားဖြင့် ... ) ရှိခဲ့လျှင်ရှိသမျှတို့, လျင်မြန်စွာကူးမြောက်လိမ့်မယ်။ ယေဘုယျခုနှစ်တွင် adapter နောက်နေ့ရှာဖွေခြင်း, ပြီးနောက်, console ကိုငါနေဆဲချိတ်ဆက်ရန်နှင့် configure (နှင့်ကအတူချိတ်ဆက်ဖို့ခြားနားချက်ပိုင်ရှင် consoles စရှင်းပြမိနစ် 20 ကြာအောင်: သူခငျြတလမ်း, သငျသညျ ... တစ်ဦး adapter မရှိဘဲချိတ်ဆက်လို့မရပါ) ။
အလိုအလျောက်ပြောင်းခြင်းကီးဘုတ် layout ကို - ကိုအကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ကို
နေ့သည်ကောင်းသော! ဒါဟာခညျြးနှီးဆှေးနှေးယ့်ပုံပဲ - ကီးဘုတ်ပေါ်ကီးဘုတ် layout ကိုပြောင်း, နှစ်ခုခလုတ် Alt + Shift ကိုနှိပ်, ဒါပေမယ့်ကြောင့် layout ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်, ဒါမှမဟုတ်ကာလ၌နှိပ်နှင့် layout ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်မေ့လျော့မထားဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုငှါ, စကားလုံးပြန်ရိုက်ထည့်ပါရန်ရှိသည်မည်မျှကြိမ်။ ငါနှင့်အတူပင်ပုံနှိပ်နှင့်စာရိုက်၏ "မျက်စိကန်း" နည်းလမ်းတွေအများကြီးကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကိုလက်မခံကြောင်းထင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုချက်ချင်းအားလုံးပြတင်းပေါက် minimize သလော
အဆိုပါ Windows operating system အားလုံးပွင့်လင်းပြတင်းပေါက်အထူး function ကိုဝှက်ရှိပါတယ်, လမ်းဖြင့်, အားလုံးမဟုတ်သည့်သတိပြုမိကြသည်။ တဦးတည်းမိတျဆှေတစျဦးတို့ကတဦးတည်းပွင့်လင်းပြတင်းပေါက်များစွာခေါက်အဖြစ်မကြာသေးမီကသူသည်အဘယ်ကြောင့်ခေါက်သေတ္တာများရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ် ... တစ်ဦးသကျသခေံခဲ့သလဲ သင်သည်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်း, တစ်ပြိုင်နက်သငျသညျပွင့်လင်းသော e-mail ကိုအစီအစဉ် (သင်သင်လိုအပ်သည့်အချက်အလက်ရှာဖွေနေသည့်အတွက်) မျိုးစုံ tabs များနှင့်အတူ browser ကိုပဲသင်ဂီတနှင့်အတူကစားသမား play နောက်ခံခံစားရန်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်ဆိုပါစို့။
ငါ Motherboard ကမော်ဒယ်ကိုဘယ်လိုသိသလဲ
မင်္ဂလာပါ အတော်လေးမကြာခဏကွန်ပျူတာ (သို့မဟုတ် Laptop ကို) ရက်နေ့မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါ Motherboard က၏အတိအကျမော်ဒယ်နာမကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ကယာဉ်မောင်း (https://pcpro100.info/net-zvuka-na-kompyutere/ တူညီတဲ့အသံသည်ပြဿနာများ) နဲ့ပြဿနာများ၏အမှု၌လိုအပ်ပါသည်။ ကောင်းပြီ, သင်ဆဲဝယ်ယူပြီးနောက်စာရွက်စာတမ်းများရှိ (သို့သော်မကြာခဏသို့မဟုတ်မ, သို့မဟုတ်မော်ဒယ်အဲဒီမှာစာရင်းမပါ) လျှင်။
မင်္ဂလာပါ ကောင်းသောမိတ်ဆွေများ, သူငယ်ချင်းများ, ဆွေမျိုးသားချင်းများ: အထံတော်သို့နီးကပ်လူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်မှု၏အရှုံး - ကံမကောင်းစွာပဲနီးပါးတိုင်းလူတစ်ဦးတဦးတည်းပြဿနာအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ျာလူတစ်ဦးကိုရှာဖွေနိုင်အောင်လွယ်ကူသည်မဟုတ်, သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၏ယခုအသက်အရွယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း ... ငါအမျိုးသားရေးဝန်ဆောင်မှုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရှာဖွေရေးကလူကိုရုရှား၌ရှိ၏အဘယ်ကြောင့်ကြောင်းရဲ့ခန့်မှန်း - လမ်းဖြင့်, အရာကိုလည်းတီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာပါ (eponymous ဂီယာ "ငါ့ကိုစောင့်ပါ" သငျသညျ) ကိုအလွန်ရှာဖွေကြသည်သူတွေကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။
နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှ PDF ကိုပြောင်းမှဘယ်လိုနေသလဲ?
အဆိုပါ PDF ကို format နဲ့ Non-ပြုပြင်နိုင်သည့်ပစ္စည်းများဘို့ပြီးပြည့်စုံပေမယ့်စာရွက်စာတမ်း edited ခံရဖို့ပါလျှင်သူကအလွန်အဆင်မပြေဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျက MS Office ကို format နဲ့ထဲသို့ပြောင်းလျှင်မူကား, ထိုပြဿနာကိုအလိုအလျှောက်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ယနေ့ငါသင်အွန်လိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှ PDF ကိုပြောင်းနိုငျသောန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. သင်ပြောပြနှင့်ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲတူညီသောအရာလုပ်ဖို့အစီအစဉ်များအပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
နေ့သည်ကောင်းသော။ graphics card - ဤဆိုကွန်ပျူတာ (ဖက်ရှင်ကစားစရာကဲ့သို့ပြေးသောအထူးသဖြင့်တဦးတည်း) ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နှင့်ခဲကို PC များ၏မတည်မငြိမ်စစ်ဆင်ရေး device ကို၏မြင့်အပူချိန်တည်ရှိသည်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အပူလွန်ကဲပြီး PC ၏အဓိကရောဂါလက္ခဏာတွေနေသောခေါင်းစဉ်: မကြာခဏဆွဲထား-Up (အထူးသဖြင့်အခါကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းများနှင့် "လေးလံသော" အစီအစဉ်များ), restart လုပ်လိုက်ပါ, အပိုငျးအမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာပေမည်။
ချောင်းကို-ka စတစ်ကာ! သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ self-ကော်စက္ကူ
7 စက္ကန့်စားသုံးသူကဖွဲ့စည်းထုတ်ကုန်၏ပထမဦးဆုံးစှဲ။ အဖြစ်ကောင်းစွာရုံးသို့မဟုတ်က်ဘ်ဆိုက်အဖြစ်, ကုန်ပစ္စည်းထုတ်ပိုးတံဆိပ်၏မျက်နှာကိုဖြစ်ပါတယ်။ စနစ်တကျကုန်ပစ္စည်းများကိုတင်ပြ - တစ်အနုပညာတစ်ခုဖြစ်သည်, သင်အံ့မခန်း Vista ရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မယ်, အဲဒီကျွမ်းကျင်။ စတစ်ကာ - ထို Self-ကော်စက္ကူထုတ်ကုန်အားလုံးကိုတစ်ခုထီးဝေါဟာရကို။
မင်္ဂလာပါ အချို့ကိစ္စများတွင်ကဥပမာများအတွက်လက်ပ်တော့၏အတိအကျမော်ဒယ်မယ့်ကုမ္ပဏီ-ထုတ်လုပ်သူ ASUS ကနှင့် Acer ကိုသိရန်လိုအပ်ပေသည်။ အတော်များများကအသုံးပြုသူများကိုတိကျစွာလိုအပ်ပါသည်အဘယ်အရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရသောအခါအလားတူမေးခွန်းတစ်ခုကိုမဟုတျဘဲအစဉ်အမြဲတတ်နိုင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရနေကြသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ငါဒါပျေါအဘယျသင့်ရဲ့ Laptop ကိုထုတ်လုပ်သူ (ASUS က, Acer မှ, HP က, Lenovo က, Dell, Samsung နှင့်မကိစ္စသက်ဆိုင်ရာဖြစ်လတံ့သောလက်ပ်တော့ရဲ့မော်ဒယ်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးလမ်းကိုအာရုံစိုက်ဖို့ချင်တယ်။
တစ်ဦးကို TV ရန်သင့် Laptop ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
နှိုင်းယှဉ်မဟုတ်ဘဲဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့ laptop ကိုသာချမ်းသာကြွယ်ဝလူတွေတတ်နိုင်သို့မဟုတ်တာဝန်အသက်မွေးဝမ်းအပေါ်နေသောသူတို့ကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိသည်။ သို့သော်အချိန်စသည်တို့ကို, ဖြတ်သန်းနှင့်ယခုအများစုမှာ laptop, tablet - ။ ဒါဟာမရှိတော့အိမ်များအတွက်ဇိမ်ခံကားလိုအပ်သောကွန်ပျူတာပစ္စည်းကိရိယာဖြစ်ပါတယ်။ တီဗီမှတစ်ဦး Laptop ကိုချိတ်ဆက်ခြင်းသိသိသာသာအားသာချက်များကိုပေးသည်: - အရည်အသွေးကောင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ screen ပေါ်မှာရုပ်ရှင်ကြည့်၏ဖြစ်နိုင်ခြေ; - သင်လေ့လာနေလျှင်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်တင်ပြချက်များ ပြင်ဆင်. , အထူးသဖြင့်ထောကျအကူပွု; - သင့်အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းအသစ်ကအဆင်းအရောင်နှင့်အရောင်ဖြာပါလိမ့်မယ်။
နေ့သည်ကောင်းသော။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ PC ကိုပြဿနာများအတွက်စာရင်းဇယားယူလျှင် - တစ်ဦးကို PC မျိုးစုံ devices တွေကိုချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုသူများသည်အကြားမေးခွန်းတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်ကြောင်း: flash drive ကို, ပြင်ပ hard drives တွေကို, ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာများ, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အခြားအကြောင်းပြချက်များ, ကွန်ပျူတာတစ်ဦးအထူးသဖြင့်စက်ကိုအသိအမှတျမထားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရာရှိနိုင်ပါသည်။ အများကြီး ... ဤဆောင်းပါး၌ငါပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက်ကွန်ပျူတာကင်မရာကိုတွေ့မြင်အဖြစ်ဘာလုပ်နှင့်မည်သို့တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အမှု၌ device ကို performance ကို restore လုပ်ဖို့မအပေါ် (စကားမစပ်, မကြာခဏကိုယ့်ကိုကိုယ်တွေ့ကြုံနေကြရသော,) ကိုအကြောင်းတရားများ, စဉ်းစားရန်လိုကြသည်။
100 GB ကို: အများစုမှာခေတ်မီကွန်ပျူတာများကိုတစ်ဦးမျှမျှတတ capacious hard drive တွေတပ်ဆင်ထားကြသည်။ ထိုအတှေ့အကွုံမြားအမြားဆုံးအသုံးပြုသူများ disc ကိုအပေါ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှစုပြုံခြင်းနှင့်အတူတူပင်ဖိုင်တွေများစွာကိုပြန်လုပ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ ကောင်းပြီဥပမာ, သငျသညျစသညျပုံများ, ဂီတ, ၏ collection များကိုအမျိုးမျိုးကို download လုပ်ပါ - ။ သငျသညျပြီးသားရှိစေခြင်းငှါများစွာသောထပ်ဖိုင်တွေ၏ကွဲပြားခြားနားသော collection များကိုများထဲတွင်။